Copperhead साधारण - धेरै रोचक चित्रकला एक मनोरम चुस्त सर्प। जो उनको सँगी सांप को सबै भन्दा छैन सक्षम छन् यो सरसृप धेरै, nimble चाल सम्म प्राप्त गर्न सक्षम छ। Copperhead सर्प, यो पुच्छर द्वारा जमीन बन्द उठाएर छ भने, नाटकीय arched, तपाईंको टाउको र offender गरेको औंलाहरु साहसी क्षति गर्न सक्नुहुन्छ। पश्चिमी साइबेरिया देखि Copperhead प्रसार पश्चिमी युरोप, तर दक्षिणी क्षेत्रमा थप सामान्य छ।
, बेज खैरो वा brown- को - यसको शरीर को शीर्ष कोटिंग रंग मा खैरो अनुदैर्ध्य सानो गाढा स्थलहरू संग। को पेट वा चाँदी sheen र गाढा स्थलहरू को ढाँचा संग भूरा खैरो-खैरो। यौवन अवस्था पुग्नुभएको छ जो पुरुषहरु मा, पेट सुन्तला वा ईटा-रातो टन रंग छ। पुरुषहरु महिलाहरुको भन्दा अलि साना हुन्छन्। पछाडि दुई कहिलेकाहीं मर्ज जो, एक हीरा आकारमा स्थलहरू छन्। आँखा बाट नथना गर्न, र त्यसपछि गाढा रंग को एक व्यापक दल आफ्नो मुख को कुना गर्न को विस्तार। Copperhead सर्प राउन्ड pupils र रातो-खैरो छ को आइरिस सुनको रंग संग आँखा। लम्बाइ सरसृप 80 सेमी सम्म पुग्छ। ट्रंक र पुच्छर चिल्लो मा flaps।
कारण प्रभावशाली आकार र उच्च aggressiveness गर्न अक्सर कि सर्प Viper लागि गलत र हत्या हो। किनभने यो आंशिक र आंशिक - किनभने खस्कँदो वातावरणीय अवस्थाको, यो endangered रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। venomous र मानिसहरूलाई खतरनाक, तर यो छैन - केही मानिसहरू सर्प copperhead ठान्छन्। यसको विष मात्र मुसा वा छेपारो लागि खतरनाक छ। Viper यो सरसृप एक बल्लतल्ल सजिलै देखिने घाँटी अवरोधन एक संकीर्ण टाउको, ठूलो ढाल टाउको, चिल्लो मापनहरू र राउन्ड pupils (ठाडो Viper देखि) द्वारा प्रतिष्ठित छ।
मोशाको को ड्राई जङ्गलहरूमा Copperhead सर्प जीवन, घाम Meadows मा, overgrown clearings फेला, शुष्क पाइन वनको किनारा, रोलिङ पहाड प्रेम गर्नुहुन्छ। ponds र wetlands को सर्प किनारा जोगिन। कहिलेकाहीं यो सडक र रेलवे embankments साथ पाउन सकिन्छ। habitats चिल्लो सांप छेपारो लागि बनाउन आधारभूत खाद्य पदार्थ को उपलब्धता मा निर्भर छन्।
धेरै अन्य सरीसृप, copperhead विपरीत - राम्ररी परिभाषित क्षेत्रमा प्रादेशिक सर्प र जीवन धेरै वर्ष को लागि 1 हेक्टर अधिक छैन। copperhead खतरा महिनामा आश्रय मा लुकाउन tends, तर यो पनि offender आक्रमण गरेर आफूलाई रक्षा गर्न सक्छन्। पारंपरिक shelters मृत काठ, कृंसम्म burrows, रूख जरा र बिग्रेको स्टम्पहरू को उनको ढेर सेवा गर्न।
Copperhead सर्प जाडो निष्क्रिय हुन्छ र औसत दैनिक तापमान नाघ्यो जब 15 ° सी अप्रिल, को बीचमा वरिपरि wakes सिजन संभोग त्यो मई मा सुरु हुन्छ। यो Ovoviviparous साँप छ। महिला प्रजनन - 5-10 पिल्ले। भ्रूण लगभग 2.5 महिना विकास र जवान मिड-अगस्ट गर्न लेट जुलाई देखि जन्म छन्। Copperhead उहाँले विशेष गरी बिहान, सूर्य आनन्द उठाउँछन् गर्न प्रेम, दिन को समयमा सबै भन्दा सक्रिय छ।
यी सांप को संख्या मा सामान्य व्यापक तलतिर प्रवृत्ति किनभने तिनीहरूले भर्खरै कम आफूलाई भएको छ जो छेपारो को मुख्य भोजन, छन्।
यो खाद्य आपूर्ति रूपमा छेपारो खान जो मात्र होइन सांप, जस्तै विश्वसनीय छैन, तर पनि सानो मुसा र भ्यागुतो।
Copperhead मात्र सामान्य फिड को चरम अभाव अन्तर्गत त्यसैले गर्छ। यस्तो समयमा पनि मान्छेको मासु खाने चलन यी सरीसृप अवलोकन गर्न सकिन्छ। धेरै देशहरूमा, copperhead सर्प व्यवस्था सुरक्षित छ।
जादू पत्थर: गारनेट, यसको प्रजातिहरू र गुण
को काडा सागर: पर्यावरण समस्या र आफ्नो समाधान। विशेषज्ञ राय
"के राम्रो छ र के खराब छ?" विश्लेषण Mayakovsky कविता
नयाँ घर मा शुभकामना। परम्परा र चलन
पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस मा जोइन्टहरूमा को गैर-शल्य चिकित्सा उपचार
Mayli Sayrus कसरी पुरानो छ, र के वर्षमा त्यो जन्म भएको थियो?
बजार अवस्थामा लाभ को Maximization